Serivisy fanodinana cnc avo lenta china | PTJ hardware inc.
SERVICES MACHINING CNC
Milina fanodinana haingana
Fikosoham-bary dia fomba iray mahomby tokoa amin'ny fanaovana prototypes sarotra. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny milina cnc eto dia misy alimo, vy tsy misy fangarony, titanium sns.
CNC Turning Ampiasaina indrindra amin'ny velaran'ny vodin-trano sy ivelany amin'ny zana-kazo na ny kapila, ny atiny ivelany sy ny atiny ivelany misy ny zoro taper, ny atiny mivelatra anatiny sy ivelany, ny kofehy vita amin'ny kodiarana sy ny kofehy, sns., ary azo ampiasaina amin'ny fanovozana,ary atsofony, famerenana, famerenana amin'ny laoniny sns.
SERVICE FIZARANA PRECISION
Machining Cnc Soisa
ny milina cnc swiss Izy ireo dia tonga lafatra amin'ny famolavolana ireo faritra kely sarotra na kely aza ny volany. Ny ampahany tena marina novokarintsika dia ny thimble amin'ny fantsom-telefaona. Ny lavaka fantsona dia tsy hitan'ny mason'olombelona.
SCOPE amin'ny serivisy famokarana
Famokarana Machining CNC
Ny fonosan'ny masinina dia manarona anay fiara,aerospace, fitaovana milina, fitaovana fananganana,indostria tarihin, faritra elektronika sy faritra hafa tsy manara-penitra.
Fitaovana vita amin'ny masinina vita amin'ny CNC
Maninona no mifidy hiara-hiasa amintsika
Vidiny tsy mety resy
Mitsitsia 30 isan-jato na mihoatra!
Afaka mandresy ny teny nalaina rehetra isika!
ISO 9001: 2008 voamarina
Miatrika olana eto isika
Teny nalaina avy hatrany
Vonona ny hanompo anao 24/7!
Raiso mandritra ny ora maro ny teny nalainao!
FIANARANA momba ny tranga misy eto aminay
Andao hojerentsika ireo horonantsary ary hianarantsika bebe kokoa momba ny fitokisana PTJ Hardware.